Fanafihana tokantrano :: Mpanao gazety frantsay voaroban’ny jiolahy • AoRaha
Fanafihana tokantrano Mpanao gazety frantsay voaroban’ny jiolahy
Nanararaotra ny hidintrano nigoragora ireo jiolahy roa nanafika tao amin’ny mpanao gazety frantsay, teny Ambohitrarahaba, tamin’ny herinandro lasa teo. Najifa ny vola telo tapitrisa ariary mahery sy finday roa, solosaina iray ary kojakoja maro hafa rehefa voambana antsy io lehilahy misolo tena ny gazety tsy miankina iray avy any ivelany io.
Tsy misaron-tava ireto jiolahy roa nitondra antsy lava niditra tao amin’ny tranon’itsy teratany vahiny itsy, tokony ho tamin’ny 11 ora sy sasany alina, araka ny loharanombaovao. Efa tafiditra tao antrano izy ireo vao taitra ilay mpanao gazety. Nalain’ny jiolahy hatramin’ny karatra maha mpivahiny azy eto Madagasikara, ankoatra ireo fitaovana elektrônika fampiasany amin’ny asa fanaovangazety. Nampandre ny teo amin’ny manodidina izy rehefa lasa ireo jiolahy.
Trano iray misy teratany vahiny maromaro monina itsy trano voatafika itsy. Sendra tsy tao an-toerana ny maro tamin’ireo mpanofa fa lasa niala sasatra. Nentin’izy ireo niaraka taminy ny alika lehibe iray teo an-tanàna. Voalaza ihany koa fa nisy mpanofa iray saingy sendra nivoaka ny trano, tamin’io alina io, ka teo no tsy nampihidy an’ity trano lasibatra ity.
Tonga teny amin’ny tranon’io mpanao gazety io ny mpitandro filaminana taorian’ny fahafantarana ny zava-niseho. Nametraka fitoriana tamin’olon-tsy fantatra iry niharam-boina. Tombanana ho olona mahalala ny momba ny fiainan’ireo teratany vahiny ihany izy roa lahy nanafika iretsy, raha ny loharanombaovao. Eo am-pikarohana an’reo olon-dratsy ny zandary eny Ankadikely
Fiainana ny karemy :: Mandresy ny demony ny fiombonana amin’Andriamanitra
Mozika rock :: Hihaona voalohany amin’ ny mpankafy ry Mage 4